मामा गोबिन्दा र भान्जा कृष्णाको बिबाद उग्र बन्दै , खराब बुहारीको ट्याग पाएपछि कश्मिरा शाहले सुनितालाई यसरी गरीन् गाली – OSNepal
मामा गोबिन्दा र भान्जा कृष्णाको बिबाद उग्र बन्दै , खराब बुहारीको ट्याग पाएपछि कश्मिरा शाहले सुनितालाई यसरी गरीन् गाली
बलिउड अभिनेता गोबिन्दा तथा उनका भान्जा कमेडियन कृष्णा अभिषेक बीचको बिबाद झन् झन् चर्किदै गएको छ । कश्मीरा शाह र गोबिन्दाकी पत्नी सुनीता एक अर्का प्रति सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष प्रहार गर्नमै ब्यस्त रहेका छन् । उनीहरुको वाक यद्ध झन् झन् बल्झिदो अवस्थामा रहेको छ । उता भान्जा कृष्णा मामा गोबिन्दा संग माफीको लागि भन्दा भन्दा थाकिसकेका छन् ।
केही दिन अघि सुनिताले कश्मिरालाई एकदमै खराब बुहारीको संज्ञा दिएकी थिईन् । जसको जवाफ अहिले कश्मिराले फर्काएकी छिन् । आफुलाई खराब बुहारीको ट्याग लगाई दिए पछि सुनीता आहुजालाई ट्वीटर बाट कडा जवाफ फर्काएकी छिन् । कश्मीराले ट्वीटरमा लेखेकी छिन्–वर्क ट्रिपका कारण बाहिर थिए । भखैरै फर्किएकी छु तथा देखिरहेको छु कि हाम्रो पारिवारिक कुरामा केही ब्यक्ति हात धुएर लागि परेका छन् ।
एक बयान पढिरहेका बेला मलाई मेरो छोरोले सोध्यो कि खराब बुहारी भनेको के हो ? मैले जवाफ दिए त्यो बुहारी जसले एक क्रुर सासु पाएकी छे । यसअघि सुनिताले परिवारमा झगडा त्यतिबेला हुन्छ जब हामीहरु खराब बुहारीलाई घर ल्याउँछौ भनेकी थिईन् ।
Next: पोल्याण्डले अफगानी शरणार्थीहरुलाई आफ्नो देश छिर्न दिएन , यसरी कुट्दै फिर्ता पठायो
Next: चर्चित बलर सन्दिप लामिछाने कारबाहीमा , स्लो ओभर रेटको आरोप
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न :एमसीसी के गर्ने ? बोल्नुपर्दैन ?
अन्तत फुट्यो एमाले, माधब नेपाल पक्षले गरे नँया दल दर्ता
नेपाली शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै नयाँ कीर्तिमान